यी बलिउड स्टार, जसले गर्छन् अरु पनि धन्दा
बलिउडमा सफलता, नाम र चर्चाको समय त्यति लामो हुँदैन । थाहा नै हुँदैन, को रातारात स्टार बन्छ र को रातारात गुमनाम बन्छ ।
यसैले भएर होला, आजकल बलिउड स्टारहरु अभिनयमा मात्र अडिन सकेका छैनन् । उनीहरुले अभिनयसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेका छन् ।
शाहरुख खान बलिउडमा सबैभन्दा धनी अभिनेताको रुपमा चिनिन्छन् । शाहरुखले आफ्नो फिल्म प्रोडक्सन हाउस खोलेका छन्, जसको नाम हो, रेड चिली इन्टरटेनमेन्ट । उनको प्रायः फिल्म यसैले बनाउँछ ।
शाहरुख क्रिकेट लिग आइपिएलमा कलकत्ता नाइट राइडर्सको मालिक पनि हुन् । शाहरुख यसको सँगसँगै इम्याजिनेसन एडुटेन्मेन्ट प्राइभेट लिमिटेडमा पनि लगानी गरिरहेका छन् ।
सलमान खानको भारतमा र विशेषगरी मुम्बईमा उल्लेख्य सम्पत्ति छ, जसमध्ये एउटा हो पनवेल वाला फर्महाउस ।
सलमान खानको कमाईका उल्लेख्य भाग आफ्नो संस्था ‘बिइङ ह्युमान’मा जान्छ । हालसालै उनले आफ्नै प्रोडक्सन सलमान खान प्रोडक्सन पनि सुरु गरेका छन् ।
जोन अब्राहमले आफ्नो आफूले अध्ययन गरेको अर्थशास्त्रको डिग्रीलाई प्रयोग गर्न सुरु गरेका छन् । जोनले विकी डोनरको सफल प्रोडक्सन हाउस सुरु गरेका छन् । जोन अब्राहम हक्की लिगमा हक्की टिमको मालिक पनि हुन् ।
अक्षय कुमारसँग दुईवटा फिल्म प्रोडक्सन हाउस छन्– गेजिंग गोट पिक्चर लिमिटेड र हरी ओम इन्टरटेनमेन्ट ।
हालसालै अक्षय कुमारले राज कुन्द्रा र शिल्पा शेट्टीसँग मिलेर टिभी सपिङ्ग च्यानल बेस्ट टिभी डिल सुरु गरेका छन् ।
अक्षय भन्छन्, ‘बेस्ट टिभी भेन्चर हामीले राज कुन्द्राको काँधमा राखेर चलाइरहेका छौं र यो भेन्चरले मेरो धेरै समय लिँदैन ।’
शिल्पाले जतिबेलादेखि व्यापारी राज कुन्द्रासँग विवाह गरिन्, त्यतिबेलादेखि नै उनी फिल्ममा कम र आफ्नो पतिको साथ नयाँ नयाँ व्यापारमा समय धेरै दिइरहेकी देखिन्छिन् ।
जस्तो कि आइपिएल टिम राजस्थान रोयल्स, गोल्ड ज्वैलरी व्यापार, फिल्म प्रोडक्सन हाउस ‘इसेन्सियल स्पोर्ट्स एण्ड मिडिया’ र हालसालै उनले टिभी सपिङ्ग च्यानल पनि सुरु गरेकी छिन् ।
अगजले प्रोडक्सन हाउसको साथसाथै आफ्नो पैसा गुजरातको एक सोलार प्लान्टमा लगाएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘भारतमा सधै ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ, र यो समय ग्रीन इनर्जीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ किनकी ऊर्जाको भविष्य यसैमा छ ।’
सोनाक्षी सिन्हा अभिनयमा आएको धेरै नभएपनि उनले अभिनयको अलावा शिल्पा र अक्षयसँग मिलेर टिभी सपिङ्ग च्यानल बेस्ट टिभी डिलमा लगानी गरेकी छिन् ।
सोनाक्षी भन्छिन्, ‘अभिनय सँगसँगै अरु यस्ता धेरै विकल्प छन्, जहाँ म समय र पुँजी लगानी गर्न सक्छु र गर्छु पनि ।’
सुनिल शेट्टीको कैयौं क्लब र रेष्टुरेन्टहरु मुम्बईमा छन् । सुनिल शेट्टीले क्लोथिंग र होम डेकोरेटनको व्यापार पनि सुरु गरेका छन् ।
कैयौं अभिनेता र अभिनेत्रीहरु समेत प्रोडक्सन हाउस खोलिरहेका छन् जस्तो अमिर खान, अरबाज खान, अनुष्का शर्मा, अमिषा पटेलहरु । यसैगरी कैयौं सेलिबे्रटीहरुले ग्ल्यामरसँगसँगै क्लोथिंगको लाइनमा पनि हात हालिरहेका छन् जस्तो कि हृतिक रोशन, आलिया भट्ट, बिपाशा बासु, सोनम कपूर र दीपिका पादुकोण ।
किन गर्छन् व्यापार ?
चर्चित ट्रेड एक्सपर्ट आमोद मेहरा भन्छन्, ‘अभिनेता अभिनेत्रीलाई ब्रान्ड वा कम्पनीको लागि जब ठूलो मात्रामा आम्दानी हुन्छ, उनीहरु त्यसलाई अझै बढाउन चाहन्छन् । यसले उनीको ब्रान्ड पनि बढ्छ । उदाहरणको लागि शाहरुखले किडजानियामा लगानी गरे, त्यहाँ जाने बच्चाहरुले खान बारे जानकारी पाउँछन् र उनको फ्यान बन्दछन् । अर्कोकुरा उनीहरुको पब्लिसिटी मिल्छ, जस्तो कि शिल्पा शेट्टी ।’
आमोद महरा अगाडि भन्छन्– ‘अभिनेताले आफूले कमाएको सम्पत्तिलाई पहिलादेखि नै लगानी गरिरहेको पाइन्छ । जस्तो कि धर्मेन्द्रले जमिनमा लगानी गरेका छन् भने अजय देवगनले पनि जमिनमा लगानी गरेका छन् । जितेन्द्रले आफ्नो धेरै लगानी हाउजिङ परियोजनामा लगाएका थिए । सञ्जीव कुमार र अमजद खानको रेष्टुरेन्ट थियो । यहाँ अभिनेताहरुलाई पब्लिसिटी पनि मिल्छ र पैसा पनि ।’
उनी अगाडि थप्छन्, ‘सेलिबे्रटीहरुको दिमाग हुँदैन । उनीहरु अभिनय गर्न सक्छन् तर व्यापार सक्दैनन् । यहाँ त लगानीकर्ता बैंकर्स हुन्छन् जो सेलिबे्रटीको लागि व्यापार गर्छन् ।’
–सुप्रिया सोगले, बीबीसी हिन्दीबाट
कोरोना महामारीबीच बहुप्रतिक्षित ‘राधे’को ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियोसहित)
‘हट बिकिनी’सँगै इन्टरनेट तताइन् दिशा पटानीले , पोष्ट गरेको १ घण्टामा १० लाख लाइक
एक्कासि किन बिग्रियो करण जोहर र कार्तिक आर्यनको सम्बन्ध ?
तमिल अभिनेता विवेख अस्पतालमा भर्ना
अर्जुनसँग डेटिङ गरिरहेकी मलाइकाले इङ्गेजमेन्टको झल्को दिने गरी औंठी लगाएपछि…
कोरोनामुक्त भइन् आलिया
असार २५ मा ‘दुष्प्रयास’
कोरोना ‘नेगेटिभ’ देखिएपछि घर फर्किए अक्षय कुमार
‘सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो सबै राम्रो तर अरुको सबै खराब देख्ने मानिस धेरै छन्’
सरेको सर्‍यै ‘सूर्यवंशी’, नयाँ रिलिज मिति अप्रिल ३०
बलिउडमा कोरोना संकट: अक्षयपछि कौलश र पेडनेकर पनि भाइरसबाट संक्रमित
‘क्रसरोड्स–कथा तिम्रो र मेरो’को छायांकन सुरु
चलचित्र निर्देशक तथा निर्माताहरुलाई नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजको सम्मान
र्‍यापर डिएमएक्सको अवस्था गम्भीर, अत्यधिक लागू ‌‌‍‍औषध सेवनले हृदयघात भएको आशंका
अक्षय कुमारमा कोरोना पोजिटिभ, सम्पर्कमा आएका सबैलाई परीक्षण गर्न आग्रह
छोरी जन्माएको २ महिनापछि अनुश्का किन फर्किइन् काममा ? पुरानो भिडियो भाइरल
आज अजयको जन्म दिन तर कहिल्यै काट्दैनन् बर्थडे केक
आलिया भट्टलाई पनि कोरोना संक्रमण, ‘सुरक्षित रहन’ सबैलाई आग्रह